၂၀၂၀ တွင်အိုင်ဖုန်းကိုမည်သို့ရယူနည်း (အလွယ်ဆုံးဟက်ကာများ!)
နေအိမ် ဖုန်းကို Hack iPhone ကိုဘယ်လို Hack မလဲ
iPhone ကိုတိတ်တဆိတ်ဘယ်လို hack ရမလဲဆိုတာလေ့လာချင်ပါသလား။ သို့ဆိုလျှင်ယနေ့သင့်အတွက်ကံကောင်းသည့်နေ့ဖြစ်သည်။ iPhone ကိုဘယ်လို hack ရမယ်ဆိုတာနဲ့သင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုတစ်ဆင့်ချင်းသင်ပေးသွားမှာပါ။
လူတွေအိုင်ဖုန်းတွေကိုစဉ်းစားတဲ့အခါ၊ သူတို့က ၀ င်ခွင့်၊ ထွက်ခွင့်မပေးတဲ့၊ ခွင့်မပြုတဲ့ဒေတာတွေလုံခြုံတဲ့နံရံပန်းခြံတွေကိုသတိရစေတယ်။ ဒီအချက်က iPhone ကို hack ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လူတွေကိုယုံကြည်စေတယ်။
သို့သော်၊ iPhone ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းသည်မဖြစ်နိုင်သလောက်အမှန်ပင်အလွန်လွယ်ကူသည်။ သင်၏ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ဆဲလ်ဖုန်းမှအိမ်တွင်ထိုသို့ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ရုပ်ရှင်တွေမှာတွေ့ရတဲ့အရာတွေနဲ့မတူတာက pro လို hacker တစ်ယောက်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုမလိုအပ်ပါဘူး။ ပရိုဂရမ်နှင့်ကုဒ်ပါ ၀ င်ခြင်းမရှိပါ။
သင်ပေးမည့် iPhone hacking နည်းလမ်းသည်ရိုးရှင်းပါသည်။ မင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်ကဘာလဲအရေးမကြီးဘူး ကွန်ပျူတာကနေအခြား iPhone ကို hack လိုက်ပါ သို့မဟုတ်တယ်လီဖုန်းတစ်လုံးကအလုပ်ကိုသာဂရုစိုက်သည်။ ထိုမှတ်စုအပေါ်, ဒါကြောင့်ထက်မဆိုပိုကောင်းမရပါဘူး။
အပိုင်း ၁။ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ iPhone ကိုသူတို့ဖုန်းမပိုင်ဘဲဘယ်လို Hack မလဲ
၁.၁ Minspy - ဂျိမ်းစ်ဘွန်း iPhone ကို Hack ခြင်းအဆင့်
ပြီးပြည့်စုံတဲ့ iPhone Hacker
၁.၂ တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ iPhone ကိုသူတို့ဖုန်းမပိုင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
အပိုင်း ၂။ iPhone ကိုအခြား iPhone မှဘယ်လို Hack မလဲ
၂.၁ Cocospy - iPhone မှဟက်ကာများ
၂.၂ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ iPhone ကိုသင့်ဖုန်းကနေဘယ်လို Hack မလဲ
အပိုင်း ၃။ iPhone Password ကိုဘယ်လို Hack မလဲ
အင်တာနက်ပေါ်ရှိ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တော်တော်များများသည်အိုင်ဖုန်းများကိုအက်ပလီကေးရှင်းများသို့မဟုတ်အခြားနည်းလမ်းများမှတဆင့်ဟက်လုပ်ခြင်းကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် iPhone ကို hack ဖို့အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုပေးတဲ့အခါမှာတော့သူတို့အများစုဟာမအောင်မြင်ပါဘူး။
အလုပ်လုပ်သောအက်ပလီကေးရှင်းများအကြား၌ပင်လိုအပ်ချက်များသည်အလွန်မြင့်မားနေပြီး၎င်းတို့ကိုသင်ရှာ။ မရတော့ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ တစ်ချိန်ကကျွန်ုပ်သည် hack ရန်အတွက် target iPhone ရှိရန်လိုအပ်သည့် app အကြောင်းဖတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် hacking လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးဝမလိုအပ်သောအရာဖြစ်စေသည်။
ထို့ကြောင့်၊ မည်သည့် iPhone ကိုမဆိုထိုအရာကိုတစ်ကြိမ်တောင်ကြည့်စရာမလိုဘဲမည်သည့် iPhone ကိုမဆို hack နိုင်သည့်နည်းလမ်းများဒီမှာ -
Minspy iPhone hacking solution သည်သင့်အားကမ္ဘာ့အခြားမည်သည့်နေရာမှမဆိုအိုင်ဖုန်းဒေတာများကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။ ဒါဟာပဉ္စလက်ဆန်နေပုံရပေမယ့်တကယ်တော့နောက်မျိုးဆက်အဆင့်နည်းပညာပါပဲ။
Minspy သည်ကမ္ဘာအနှံ့တွင်ကြီးမားသောသုံးစွဲသူအခြေစိုက်စခန်းရှိပြီးဖြစ်သည်။ လူများစွာသည်သူတို့၏ iPhone hacking ၀ န်ဆောင်မှုကိုလစဉ်အသုံးပြုနေကြသည်။ အဲဒီမှာရှိပါတယ် Android hacking ဖြေရှင်းချက်, ဒါပေမယ့်ငါဒီလမ်းညွှန်၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာ iPhone ကို hacking အာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။
Minspy iPhone hacking solution သည် software ဗားရှင်းမည်သို့ပင်ရှိပါစေသင်အသုံးပြုမည့် iPhone model အားလုံးအတွက်အလုပ်လုပ်သည်။
Minspy ဗိသုကာသည်ပြီးပြည့်စုံသောကြောင့်ဘယ်နေရာမှသေးငယ်သောအမှားများကိုမျှရှာမတွေ့ပါ ၎င်းသည်ငါးမိနစ်ခန့်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပုံရသောသာမန် app နှင့်မတူပါ၊ ထို့နောက်သင်သည်အဆုံးမဲ့တင်ခြင်းမျက်နှာပြင်တွင်စွဲကပ်နေသည်။
iPhone ကိုဟက်ကာလုပ်တဲ့အခါမှာ Minspy ထက်အခြားဘယ် ၀ န်ဆောင်မှုကမှပိုကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လို့မရပါဘူး။ အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်သည်၊ အချို့မှာ -
သင်ဂရုစိုက်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်၏ iPhone ကိုသိမ်းဆည်းလိုပါကအချက်အလက်လုံခြုံမှုသည်ကြီးမားသောကိစ္စဖြစ်သည်။ သင်သည်သူတို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုရယူလိုသော်လည်း၎င်းကိုမည်သူမျှမမြင်နိုင်ဟုသင်မျှော်လင့်ပါသည်။
ဒါကြောင့် Minspy ဟာကိရိယာလုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ဖို့နောက်ထပ်အစီအမံတွေအသုံးပြုထားတယ်။ Minspy ဆာဗာများပေါ်တွင်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏ (သင်ထိုးဖောက်ကျူးလွန်သည့်အချက်အလက်များအပါအ ၀ င်) တစ်ခုမျှမသိမ်းဆည်းထားပါ။ အမှန်မှာ၊ Minspy အဖွဲ့ကိုယ်တိုင်ပင်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုလက်လှမ်းမမီပါ။
ဤအချက်မှာ jailbreaking သေပြီ iPhone ကို jailbreak ပြုလုပ်ခြင်းသည်ပညာရှိရာမကျပါ။ (iPhone အလုပ်လုပ်ခြင်းရပ်တန့်သွားနိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ချေများအပါအ ၀ င်) အကျိုးဆက်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ iPhone hacking ဖြေရှင်းချက်အများစုသည်သင့်အား iPhone ကို jailbreak လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
Minspy သည်အခြားသူများနှင့်မတူပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည် jailbreak မလိုဘဲပစ်မှတ်ထား iPhone မှသင်လိုအပ်သောအချက်အလက်အားလုံးကိုပေးနိုင်သည်။
အခြား iPhone တစ်ခုမှဒေတာအားလုံးကိုသင်တစ်ချိန်ကမထိဘဲမလိုချင်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိပါသည်။ ဤအရာကိုသင့်အားကမ်းလှမ်းနိုင်သောအက်ပလီကေးရှင်းများစွာမရှိပါ။ သို့သျောလညျး, Minspy နိုင်! Minspy ဖြင့်သင်သည်အခြား iPhone ကိုမထိရန်သို့မဟုတ်၎င်း၏အချက်အလက်ရယူရန်မည်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းကိုမျှတပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဒီနောက်ပိုင်းမှာပိုမို။
သင်၏ဖုန်းပေါ်ရှိ Minspy ဆဲလ်ဖုန်းသူလျှို app ကိုတစ်ယောက်ယောက်သတိထားမိလိမ့်မည်ဟုသင်စိုးရိမ်လျှင်၊ Minspy က၎င်းကိုကောင်းစွာကိုင်တွယ်ခဲ့သည်။ Minspy ကိုသုံးရန်သင်၏ဖုန်းသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာသို့မည်သည့် application ကိုမဆို download လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
Minspy သည်မည်သည့် web browser ကိုမဆိုဖွင့်လှစ်နိုင်သည့် web-based dashboard မှတစ်ဆင့်အလုပ်လုပ်သည်။ Minspy ဝဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်သင်၏အကောင့်ထဲသို့ဝင်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုသင်ဝင်ရောက်နိုင်သည်။
Minspy နှင့်သင်ရရှိသောအခြားအေးမြသည့်အရာများစွာရှိသည်။ သို့သော်စကားလုံးများအားလုံးသည်၎င်းကိုမဖော်ပြနိုင်ပါ။ အနည်းဆုံးမအဖြစ်ကောင်းသော ဒီတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ Minspy သရုပ်ပြ အလိုတော် သင်၏ system တွင်မည်သည့် app ကိုမှမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်စရာမလိုဘဲ Minspy ကိုဤနေရာတွင်မြင်တွေ့နိုင်သည်။
သင် Minspy ကိုအသုံးပြုသောအခါ iPhone ကိုဖောက်ထွင်းခံရသည့်သုံးစွဲသူများသည်သင်ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုဘယ်တော့မှမသိနိုင်တော့ပါ။ ဒါကအထူးဒီဇိုင်းကြောင့်ပါ iPhone အတွက် Minspy (နှင့်အခြား iOS devices များ) ။
မလွတ်စေနဲ့: iPhone Messages ကိုဘယ်လို Hack မလဲ
အိုင်ဖုန်းအားလုံး iCloud မှာပါ ၀ င်ပါတယ်။ ဒီ feature ကြောင့် iPhone data ကို iCloud ဆာဗာများသို့အလိုအလျောက်တင်သည်။
Minspy သည်ဤ Cloud Backup ကို အသုံးပြု၍ သုံးစွဲသူ iPhone ပေါ်ရှိဒေတာအားလုံးကိုပေးသည်။
ထို့ကြောင့်တစ်စုံတစ် ဦး ၏ iPhone ကို Minspy ဖြင့် hack ရန်လိုအပ်သည်မှာအခြားသုံးစွဲသူ၏ Minspy iCloud အထောက်အထားများကိုပေးရန်ဖြစ်သည်။
တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ iPhone ကိုသူတို့မသိဘဲ hack ချင်တယ်ဆိုရင်၊ ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့အဆင့်သုံးဆင့်ကိုလိုက်နာရုံပါပဲ။
အဆင့် ၁: Minspy အကောင့်တစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ နှင့် iOS ထုတ်ကုန်များအတွက် subscription package ကိုရယူပါ။ ၎င်းတွင် iPhone နှင့် iPad တို့ပါဝင်သည်။
အဆင့် ၂: Minspy ဖြင့်ပစ်မှတ်ထား iPhone ၏ iCloud အထောက်အထားများကိုစစ်ဆေးပါ။ ဒေတာစည်းညှိရန် Minspy သည်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာသည်။
အဆင့် ၃: သင်မြင်သောအခါ 'Start' ခလုတ်ကိုနှိပ်နိုင်သည်။ တပ်ဆင်မှုယခုပြီးစီးသွားပါလိမ့်မည်။
သင်၏ dashboard သည် Minspy ၏အင်္ဂါရပ်များအားလုံးကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သောနေရာဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုသင်၏ Facebook အကောင့်၏ပင်မစာမျက်နှာအဖြစ်မှတ်ယူပါ။
Minspy သည်သင့်အားပိုမိုလိုချင်သောအရာများကိုဘယ်တော့မျှစွန့်ပစ်မည်မဟုတ်သည့်စွမ်းဆောင်ချက်အစုတစ်ခုနှင့်အတူပါရှိသည်။ သင့်တွင် Minspy အကောင့်တစ်ခုရှိပါက၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သောအရာများအားလုံးကိုသုံးနိုင်သည်။
Social media spy သည်သင့်အား Facebook ကဲ့သို့သောလူမှုမီဒီယာ profile များမှပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုပေးသည်။ Instagram, WhatsApp, နှင့်အခြားလူကြိုက်များပလက်ဖောင်း။ သင်ပို့လိုက်သောနှင့်လက်ခံရရှိသောစာများကိုပင်ဖတ်နိုင်သည်။
Location tracker သည်အသုံးပြုသူ၏တည်နေရာကိုအချိန်မရွေးပြောပြလိမ့်မည်။ သင်သည်သူတို့၏နောက်ဆုံးတည်နေရာကိုဒေတာနှင့်အချိန်နှင့်လည်းတွေ့နိုင်သည်။ ၎င်းသည်တည်နေရာကိုခြေရာခံရာတွင်ကြီးမားသောအရာတစ်ခုဖြစ်သော geofencing ပင်ရှိသည်။
ဒီ app ခလုတ်တွေဟာမိဘများအတွက်အတော်လေးအသုံးဝင်တဲ့ feature တစ်ခုပါ။ ၎င်းသည်သင့်အားပစ်မှတ်ထားသုံးစွဲသူ iPhone တွင်ထည့်သွင်းထားသော application အားလုံးကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောမည်သည့် application ကိုမဆိုအသုံးပြုသူအားဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ကန့်သတ်နိုင်သည်။
Call Monitor သည်သူတို့၏ iPhone ပေါ်ရှိအဝင်နှင့်အထွက်ခေါ်ဆိုမှုအားလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်သည်။ သင်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုလိုလားပါက၊ သူတို့၏ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကိုလည်းမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။
ဒါက Minspy ကသင့်ကိုကမ်းလှမ်းတဲ့အရာအားလုံးရဲ့တစေ့တစောင်း။ သငျသညျက၎င်း၏အင်္ဂါရပ်အားလုံးသိလိုလျှင်သင်ကျိန်းသေသင့်ပါတယ် အခမဲ့ Minspy တိုက်ရိုက်သရုပ်ပြစမ်းပါ.
Minspy သည်တစ်စုံတစ် ဦး ၏ iPhone ကိုသူတို့၏ကွန်ပျူတာ၊ ဖုန်း၊ တက်ဘလက်သို့မဟုတ်အခြားစက်ပစ္စည်းများမှတဆင့် hack ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သော်လည်းသင်ရွေးချယ်စရာများကိုပြန်လည်သုံးသပ်လိုပါကကျွန်ုပ်နားလည်နိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်သင့်ကိုယ်ပိုင် iPhone ကို အသုံးပြု၍ တစ်စုံတစ်ယောက်၏ iPhone ကို hack နိုင်သည့်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်ပြောပြပါမည်။ နောက်ထပ်အက်ပလီကေးရှင်းများမပါ ၀ င်ပါ၊ သင့် iPhone ကို jailbreak လုပ်စရာမလိုပါ။ သင်ဟာသင်သိချင်စိတ်ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်၊ ဒါကြောင့်နောက်ထပ်ရှာရန်ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ -
နင် သင်သည်မည်သည့် iPhone နှင့် Android ဖုန်းဒေတာကိုမဆိုပံ့ပိုးပေးနိုင်သည့်အွန်လိုင်းဖုန်းဟက်ကာဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်မရေမတွက်နိုင်သောပြန်လည်သုံးသပ်မှုများပါသောအလွန်လူကြိုက်များသော web application တစ်ခုဖြစ်သည်။
တကယ်တော့၊ Forbes လိုသတင်းမီဒီယာတွေမှာ Cocospy အကြောင်းကောင်းတဲ့ဟောပြောချက်တောင်ကျွန်တော်တောင်ဖတ်ဖူးတယ်၊ TechRadar, PCMag, etc အစပိုင်းမှာတော့သူတို့ဟာချဲ့ကားပြောဆိုခြင်းခံခဲ့ရတယ်။
ဒါပေမယ့် Cocospy ကိုငါစမ်းကြည့်တဲ့အခါငါလုံးဝမှားနေတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ်။ Cocospy သည်သူ၌ရှိသည့်အပြုသဘောဆောင်သည့်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့်ထို့ထက်မကခံထိုက်သည်။
၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံသော iPhone hacking အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့် iPhone မှသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်၏ iPhone ကို jailbreak လုပ်စရာမလိုပါ။ သင့်ရဲ့ iPhone ကိုဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာတပ်ဆင်ထားသည် (ထင်ရှားသည်)၊ ဤတွင်သင်သည်အခြားအိုင်ဖုန်းများကိုခိုးယူနိုင်သည်။
မင်းရဲ့ iPhone ထဲကတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ iPhone ကိုခြေရာခံဖို့ငါ Minspy ကိုအသုံးပြုဖို့အဆင့်များမှာငါပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအတူတူပဲ။
အဓိကကွာခြားချက်ကတော့သင် iPhone အတွက် web browser ကိုသုံးရန်ဖြစ်သည် Cocospy အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပါ။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သောအဆင့်များအတိုင်းသင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
တစ်ခါတစ်ရံသင်အလိုအရှိဆုံးအရာမှာတစ်စုံတစ် ဦး ၏ iPhone စကားဝှက်ကိုသိရန်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင်သင် iPhone data များကိုအချိန်မရွေးဖတ်နိုင်သောကြောင့်သင်သည် iPhone spy app တစ်ခုကိုတောင်အသုံးပြုရန်မလိုအပ်ပါ။
iPhone စကားဝှက်ကိုမသိဘဲမသိအောင် hack ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုရှိသည့်အတွက်သင်ဝမ်းသာပါလိမ့်မည်။ ဒါ
iPhone အတွက် Keylogger
Keylogger ၏လုပ်ဆောင်ချက်များသည် Minspy နှင့် Cocospy တို့ကဲ့သို့ထိပ်တန်း app များအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူ၏သူတို့၏ဖုန်းတွင်သော့ခလုတ်အားလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်သည်။
၎င်းတို့တွင်သူတို့၏သုံးစွဲသူအမည်၊ ဝဘ်ရှာဖွေမှုများ၊ စာတိုပို့မှုများနှင့်အရေးအကြီးဆုံးမှာ - သူတို့၏ iPhone စကားဝှက်တို့ပါဝင်သည်။
၎င်းတွင်အသုံးပြုသူ၏လူမှုမီဒီယာပရိုဖိုင်းစကားဝှက်လား၊ သို့မဟုတ် iPhone သော့ခတ်မျက်နှာပြင်စကားဝှက်ပါဝင်သည်ဖြစ်စေ၊ သင်သည် Minspy သို့မဟုတ် Cocospy ကိုအသုံးပြုသည်ဆိုလျှင်သူတို့သည်သင့်ထံမှမည်သည့်အရာကိုမျှဖုံးကွယ်မည်မဟုတ်။
သင်က iPhone ကို hack ဖို့အတွက်နည်းလမ်းတစ်ခုရှာနေပြီ။ သင်ဤလမ်းညွှန်တွင်ဖော်ပြထားသောအဆင့်များကိုလိုက်နာပါကဤနည်းလမ်းတစ်ခုချင်းစီသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ စိတ်ချပါ၊ နောက်မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ယခင်ဆောင်းပါးPassword မပါပဲ Facebook အကောင့်ကိုဘယ်လို Hack မလဲ
နောက်ဆောင်းပါးFacebook Phone Hack ကို Facebook Hack နည်း